Belkin weputara nkwụnye nkwụnye ụgwọ 3,5mm maka iPhone | Akụkọ akụrụngwa
Belkin na-ebupụta nkwụnye ọkụ 3,5mm + maka iPhone
N'afọ gara aga, na mbata nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus, Apple were nzọụkwụ nke iwepu kpochapụwo mm mm 3,5 mm. maka ekweisi na echiche nke kwado ojiji nke ekweisi ikuku, dị ka AirPod nke ahụ, n'ụzọ aghụghọ, gosipụtara otu ụbọchị ahụ. Ọzọ nhọrọ bụ iji gụnyere Lightning ka Jack nkwụnye (iji ihe nlereanya ọ bụla nke ekweisi), nweta onwe gị a abụọ ekweisi na a Lightning njikọ. Ugbu a, anyị nwere nhọrọ ọzọ.
Accessorieslọ ọrụ ndị ama ama ama ama Belkin amalitela 3,5mm ọdịyo nkwụnye + odori Nkume Nkume, obere ngwa nke ga - enyere gị aka ijikwa iPhone gị ma jiri ekweisi na njikọta kpochapụwo n'otu oge. Ihe kachasị achọ ịmata, na mgbakwunye na ọnụ ahịa ya dị elu, bụ na Apple amalitekwala ire ya n'ụlọ ahịa ha.
Na-ege ntị music na-ana gị iPhone n'otu oge na Belkin RockStar nkwụnye
Obi abụọ adịghị ya na uru nke ngwa ọhụrụ a nke Belkin wetara n'ahịa maka mod? ọnụahịa nke 34,99 euro Agbanyeghị, ọ bụ ihe ijuanya na, n'okpuru mgbaghara nke iwepu eriri na ndụ anyị, Apple na-ere ngwa a n'ụlọ ahịa ha. Bịanụ, ọ na-akpali anyị iji dochie eriri nke nweburu n'efu maka ngwa nke na-efu anyị € 34,99. Ee, amaara m na onye nrụpụta ahụ abụghị Apple, mana ụlọ ọrụ Cupertino nabatara ya na akara MFi yana site na ire ya ozugbo.
Ọhụrụ Nkume Nkume Belkin dị ka ihe sitere na ụlọ ọrụ eriri USB nke Apple. Na a enweghị isi ọcha, nwere n'otu njedebe a nwoke Lightning njikọ na ị jikọọ na iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ma ọ bụ X. na nsọtụ nke ọzọ ọ na-enye nwanyị njikọ njikọ Lightning na plọg jaak 3,55 mm. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ijikọ batrị dị na mpụga ma ọ bụ jikọọ ya na ọkụ eletrik, ka ị na-ege egwu kachasị amasị gị site na ekweisi ma ọ bụ ọkà okwu.
Kedu ihe ị chere banyere echiche ahụ? Na-eme atụmatụ ị nweta ihe nkwụnye ọkụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Belkin na-ebupụta nkwụnye ọkụ 3,5mm + maka iPhone
Manolo Lama gbapụrụ ndụ, anyị ga-enwe FIFA World Cup 2018
Anyị nyochaa S-Box, akara ngosi TV ọcha na arụmọrụ dị mma